Wararka - Ku laabo digniinta midab-isboorti runta ah
Saamaynta bay'adaha kala duwan ee bulshada iyo jirrabaadda noocyada kala duwan ee waxwalba waxay si joogto ah u cunaan nuxurka nolosha, sidoo kale waxay soo jiitaan dabeecadda fudud ee asalka ah. “Ku noqoshada runta” micnaheedu waa ku soo noqoshada dabeecada iyo nolosha dambi la’aan. Marka cilmiga deegaanka, caafimaadka aadanaha iyo xinxing dhammaantood ay ku noqdaan marxaladdii asalka ahayd, oo ay si togan u dareemaan waxyaabaha qurxoon ee kugu hareeraysan, ka saaraan kakanaanta xad-dhaafka ah una soo noqdaan nuxurkeedii, noloshu waxay heli doontaa heshiis weyn. Midabada muhiimka ah ee dayrta 22/23 iyo dharka isboortiga jiilaalka waxaa laga soo saaray waxyaabaha quruxda badan ee nolosha iyo dabeecadda. Cilmu-nafsiga midabku wuxuu saamayn ku yeeshaa macaamiisha raacda yididiilo iyo isu dheelitirka caafimaadka iyo deegaanka, iyagoo keenaya tamar wanaagsan iyo dareen nabadgelyo Sidaa darteed, midabbada dabiiciga ah ee aadka u cufan ee muujinaya tamarta togan ayaa ah muuqaalka ugu muhiimsan, midabada dhexdhexaadka ah ee kordhiya xasilloonida iyo bogsashada waxay keeneysaa dareen nabadgelyo, halka midabbada dhererkeedu hooseeyo ay muujinayaan saameyn nafsi ah oo nadiif ah, aamin ah, oo qabow leh. Marka la barbardhigo xilliyadii hore, wareegga guud ee midabku wuxuu leeyahay adkeysi labadaba, muujinta rajaduna way ka xoog badan tahay halka midabku uusan lumin.
Midabka cad ee aan la daboolin wuxuu ka yimaadaa nolosha, midabka dhexdhexaadka ah ee ku soo noqda dabeecadda waa mid aan la daboolin oo dhab ah, oo keenaya degganaansho iyo bogsiin. Dareenka jilicsan ee darbigu wuxuu u keenayaa dhiirrigelinta duubka jilicsan ee jilicsan. Midabku waa mid horumarsan, fudud, wax ku ool ah, waaraya, waxaana loo isticmaali karaa xilliyada oo dhan.
Aan lahayn xoqin 22/23 dayrta iyo dharka isboortiga jiilaalka si loo muujiyo saameynta bogsashada nabdoon, duubnaan jilicsan, dhar jilicsan oo aan xirneyn iyo dharka dhogorta leh ee isku dhafan oo isku dhafan oo leh dhar, oo ku habboon dhammaan cayaaraha iyo jimicsiga; isla mar ahaantaana, caddaan aan fiiqnayn ayaa sidoo kale lagu dari karaa moodada Nooca ganacsigu wuxuu noqon karaa qalab wanaagsan oo xafiiska raaxada leh.
Glow Blue wuxuu muujiyaa dareenka qabow iyo tikniyoolajiyadda, wuxuu keenaa caafimaad, badbaado, iyo nadaafad saamayn nafsaani ah, wuxuuna dejiyaa shucuurta. Buluug dhalaalaya waa midabada muhiimka ah ee midabada xilli ciyaareedka cusub, taas oo sare u qaadeysa dhalaalka guud ee aragtida midabka waxayna ka dhigeysaa kala-guurka u dhexeeya midabada mid isku-dubbaridan. Xilliga cusub ee 'Glow Blue' wuxuu ku darayaa naqshad raaxo iyo ballaadhan, adeegsiga midabka ugu weyn iyo nooca karti u leh inuu fasiro.
Midab buluug dhalaalaya waa midab muhiim u ah wadajirka. Sida loo isticmaalo waa furaha. Buluug dhalaalaya ayaa ah midabka ugu weyn, kana tagaya naqshado faahfaahsan oo aad u tiro badan, isla markaana adeegsanaya nooc kooban oo lagu samaynayo naqshad midab leh oo jidh buuxa leh, abuurista buluug dhalaalaya oo qabow. Dareenka midabka. Midabkani wuxuu ku habboon yahay xilliga firaaqada magaalada, jir dhiska gudaha iyo moodada adeegsiga bannaanka ee qaababka iyo qaababka kala duwan, midabkuna waa xoog badan yahay.
Mowduuca ah "ku soo noqo run" xilliga dayrta iyo jiilaalka 22/23, midabada dhexdhexaadka ah ee dhererkoodu hooseeyo iyo dhalaalka dhexdhexaadka ah waxaa lagula talinayaa inay yihiin midabbo wax ku ool ah oo waara, kuwaas oo loo adeegsan karo muuqaallo iyo xilliyo badan; dhiirrigelintu waxay ka timaaddaa dambas nolosha dhabta ah, isla mar ahaantaana waxay ku dhex jirtaa muuqaalka diiran ee danab. Midabka dhexdhexaadka ah ee leh dareenka amniga ayaa ka muuqda jirka oo buuxa, isagoo ku daraya taabashada midab casaanka midab la’aanta, taasoo dadka ka dhigeysa inay dareemaan deganaan iyo bogsasho.
Midab-dhalaalka dhexdhexaadka ah iyo cufnaanta hoose ee qiiqa cuudka leh ayaa ku fadhiya meel aan la beddeli karin iyada oo mawduuca ah "ku soo noqoshada run" xilliga dayrta iyo jiilaalka 22/23. Hadday tahay mid loo isticmaalo suudhadhka caadiga ah ama dhididka raaxada leh iyo miisaanka oo hoos u dhaca, oo ay weheliso maro maqaarka u fiican, waxay muujineysaa qiiqa laftiisa Daawaynta gaarka ah ee astaamaha midabka dabaysha. Habka isku dhejisan ayaa xakamayn kara dhar kasta oo maalinle ah.
Harada dhaadheer ee cagaaran waxaa laga soo qaatay dabiicadda, iyadoo muujineysa dareen ilaalin dabiici ah xilliga dayrta iyo jiilaalka 22/23. Waxaa laga soo dheegtay buuraha macdanta iyo harooyinka abyssal ee qotoda dheer ee dabiiciga. Ka baxso magaalada si aad ula kulanto quruxda dabiiciga, u soo qaado dareen madhan oo aad uga baxsato adduunka; xilliga cusubi waa cagaar Waxay muujineysaa dareenka midabka dhererka sare, waxay muujineysaa xoogga dabiiciga ah ee dhulka, waxayna ku dareysaa moodada dharka isboortiga, noqoshada midab moodo iyo mid casri ah xilliga kala guurka ee deyrta iyo jiilaalka.
Qoto dheer iyo xasilloon harooyinka dhaadheer ee cagaaran waxay ku habboon yihiin midabka ugu weyn, oo ku habboon cayaaraha magaalooyinka iyo xilliyada firaaqada, isboortiga dibedda, jimicsiga gudaha iyo qaababka kale ee isboortiga. Naqshadeynta daboolka sare ee dharka ayaa soo bandhigaya saameyn ilaalin ah, oo ay weheliso jeebabka dabaysha ee shaqeynaya iyo naqshado kale oo faahfaahsan oo lagu muujinayo moodada Bannaanka cusub, daabacaadda isbeddelka isbeddelka ah ee lagu daray silhouette casriga ah ee casriga ah ayaa soo bandhigaysa moodada cusub ee waddada; laga soo bilaabo wadada ilaa bannaanka iyo muuqaallo kale oo badan, harada dabiiciga ah ee qotoda dheer ayaa ku habboon.
Midabka baaruudda macdanta waxaa laga soo qaatay baaruud dabiici ah. Dareenka midab-buuxinta sare wuxuu leeyahay tilmaan dayrta iyo xasilloonida jiilaalka. Iftiinka yar ee miinooyinka baaruudda iyo gasacadaha ayaa dhammaystira midabka baaruudda diiran. Iyadoo muujineysa farxad iyo shucuur, waxay ku dareysaa jawi moodada dharka isboortiga, noqoshada midab moodada iyo mid isbeddel ah xilliga dayrta iyo jiilaalka.
Midabka baaruudda ee diirran iyo moodada ah wuxuu ku habboon yahay midabka ugu weyn, oo loo isticmaalo xilliyada firaaqada isboortiga magaalooyinka iyo qaababka isboortiga bannaanka, ama qurxinta midabka labaad oo lagu daray qaababka jirdhiska gudaha ee moodada ah, sidoo kale waa mid casri ah; iskudhaf yar oo dhumuc weyn leh oo ballaadhan oo isku-dhafan oo ah isku-xidhka sil-birta yar-yar ee magaalada yar-yar diyaar u ah inuu xidho waxay keentaa dhaqdhaqaaq magaalo oo moodle ah Dharka ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah iyo dharka raaxada leh ayaa loo isticmaali karaa sida lakabka dusha sare, oo ay weheliso nooca isboortiga dabacsan, si loo siiyo raaxo iyo waxqabadka dhammaan cayaaraha cimilada iyo firaaqada. Naqshadeynta naqshadeynta dabaysha shaqeyneysa iyo faahfaahinta qoorta sare ee dabaysha ayaa lagu daraa dharka dibadda ee biyuhu soo galaan si ay u soo bandhigaan qaab bannaanka u habboon. Laga soo bilaabo magaalada ilaa buurta iyo muuqaalada kale, midabka baaruudda macdanta ayaa ku habboon.
Mawduuca ah "Ku noqo run", nadiif ahaanta oranjiga dhalaalaya waxyar baa laga dhimay, iyadoo la sifeynayo midab madow iyo jawi deggan, midabku wuxuu soo bandhigayaa waxoogaa saameyn ah oo dib u noqosho ah, isagoo ku sii kordhinaya firfircoonida retro jawiga caajis ee deyrta iyo jiilaalka, iyo keenaya rajo wanaagsan oo ku saabsan mawduucan. Isticmaalka dharka isboortiga waxaa badanaa lagu soo bandhigaa midabka ugu weyn, oo lagu qurxiyo buluug ka soo horjeeda si kor loogu qaado dareenka retro.
Waxqabadka ugu weyn ee xilli-ciyaareedka xilli-ciyaareedka casriga ah ee loo yaqaan 'retro orange' waxaa loo isticmaalaa inuu yahay midabka ugu weyn ee aag ballaaran, qurxinta midabada midabada ka soo horjeedda ayaa ka dhawaajineysa dareenka retro ee midabka; oo ay weheliso dharka aan biyuhu iyo dabaylaha lahayn oo leh qaab ballaadhan, waxay bixisaa waxqabad loogu talagalay bannaanka moodada ah waxaana loo isticmaali karaa midab u dhigma Isku dar farsamada farsamada kaladuwan ee kaladuwan si loo muujiyo qaabka moodada ah. Retro Vibrant Orange wuxuu ku habboon yahay isticmaalka xilliga firaaqada magaalooyinka, moodada bannaanka iyo isboortiga iyo qaababka firaaqada.
Mawduuca "Ku Noqo Run" wuxuu diiradda saarayaa dambi la'aanta iyo dabeecadda. Buluugga laasili buluugga ah ee buluugga ah ee nidaamka midabka madow waxaa laga soosaaray dabiiciga dabiiciga ah, waxaana lagu daraa lakabka shaandhada cawlan, taas oo jilicsan oo fudud, taasoo dadka siinaysa dareen deggan oo is-dhexgal ah. Muddo aan xasilloonayn ka dib, lapis lazuli buluug ayaa ka muuqda aag ballaadhan, dusha sare ee dharka ayaa la isku dayi karaa in lagu daro waxyaabo jilicsan oo jilicsan, taas oo ah mid qarsoodi ah, xakameysan, iyo moodel ah.
Xilli ciyaareedkan, lapis lazuli buluug wuu xasilloon yahay oo waa la xakameynayaa, sidoo kale waa mid ka mid ah midabada isbeddelka furaha u ah dayrta 22/23 iyo jiilaalka. Dharka jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ama dharka acetate oo leh iftiin yar oo dhalaalaya ayaa kor u qaadaya awoodda muujinta ee lapis lazuli buluug, oo ay weheliso dhididka dharka caadiga ah ee moodada ah, surwaal caadi ah iyo waxyaabo kale si loo muujiyo dareenka moodada ee isboortiga magaalooyinka. Buluugga loo yaqaan 'lapis lazuli buluug' waa mid loo wada dhan yahay waxaana loo isticmaali karaa jaakadaha baseball-dhexaadka ballaaran ama jaakadaha aan caadiga ahayn, waxaana loo isticmaali karaa dharka muuqaalka badan leh si kor loogu qaado waxqabadka.
Mawduuca "Ku noqo run", midabka mugdiga ah ee mugdiga ah waxaa loo soo saaray mid ka mid ah midabada isbeddelka ee palette. Waxaa laga soo qaatay koritaanka dabiiciga ah ee berde. Waa midab dhab ah, laakiin isla mar ahaantaana waxay muujineysaa qaab isku dhafan, sidaas darteed waxay leedahay khadka tooska ah iyo khadka. Hoosta soo jiidashada, noocan oo kale ah sheeko iyo midab mooddo ayaa mudan in la isku dayo in la horumariyo.
Midabka buluugga ah ee qoto dheer iyo moodada ah ayaa ku habboon sida midabka ugu weyn ee ku habboon xilliyada firaaqada magaalooyinka iyo jimicsiga gudaha iyo qaababka kale ee isboortiga. Dharka maqaarka dhalaalaya ayaa loo isticmaalaa qaabka qaabka si loo kordhiyo qaabka moodada. Isla mar ahaantaana, waxaa loo isticmaali karaa qaabab loogu talagalay isticmaalka jirka oo buuxa, caqli iyo isbeddel; All-match wuxuu ku habboon yahay qaababka kala duwan ee walxaha ka hooseeya cayaaraha magaalooyinka.